Dunida Oo Ogaatay In Fooxa Ugu Qaalisan Uu Ka Baxo Somaliland- (Warbixin) | Hubaal Media
Guriga MAQAAL Dunida Oo Ogaatay In Fooxa Ugu Qaalisan Uu Ka Baxo Somaliland- (Warbixin)
Dunida Oo Ogaatay In Fooxa Ugu Qaalisan Uu Ka Baxo Somaliland- (Warbixin)
Ceerigaabo (Hubaal) Somaliland Sanadkan waxaa ku soo badanayey cilmi badhayaalk ku takhasusay deeganka ( Environmentalists) iyagoo sigaar ah, diiradda u saarayey fooxa(Frankincense). Oo noqday dawadda ugu isticmaalka badan , qoobaha shaybadhadda dunida (Bio Pharameceuticals).kadib markii la ogaaday inuu yahay daawadda kaliya ee kansarka(anti-carcinogenic), bararka(Anti-inflammatory).
Cilmi baadhis dheeraada oo ay samaysay jaamacadda la yidhaa (University of Oklahoma) ayaa sheegtay in saliida fooxu inay cabudhiso ama Xakamayso unugyadda kansarku kudhacay si uunan u fidin xataa, kansarka makaanka (bladder) ku dhaca xitaa inuu dilo unugayadda kansarka leh. Iyo haduu kaadi mareenka ku dhaco kansarku.ganacsiga fooxu waa waxa ugu qiimaha badan ee laga ganacsado iyadoo 500 miligram ee Salida Fooxa ah. Ganacsatadda reer Somaliland ee mishiinka miira u samaystay laga siisto $80.000 (waa sideetan kun oo dollar). Oo aan hadal la galin, dhawaan waxaa yimid Somaliland waftiyo badan UNISCO world heritage iyo Guddi ka socda EU- U.S.A pharmaceuticals-ka. Oo noo sheegay inay awal, dalalka carbeed u gayn jireen oo ay odhan jireen Arab countires ayuu gaar u yahay fooxu, iyoga ayaa noo keeni jiray ayey tidhi gabadhii waftidda hogaaminaysay oo layidhaa. Dr. Anjanette DeCarlo is Assistant Professor of Environmental Studies at St. Michael’s College, Vermont. Oo waftigaa hogaaminaysay.
Fooxa oo badeecada qiimo layahd ilaa xiliyadii hore ( Ancient time) masaarid (Egyptians) the Assyrians masebetaaniya), the Persians( Iran, Afganistan, Uzbekistan,iyo Tajikistan), Macedonians,iyo Kushites. Wuxuu fooxu yahay wax laga ganacsaddo waxaa ugu facawayn . waxaa shan iyo labaatankii kun ee sano ee ugu danbeeyey xuurto ku haystay iibinta fooxa ( Nabateans) oo ah qabiil carbeed oo reer Jordan ah. Lakiin waxay tidhi manta waxaanu ogaanay xaqiiqadda dhabta ah .
Xiligii Dawladdii Siyaad Bare jirtay waxaa ka shaqaynjiray soo ururinta beeyadda 10.000 Qays, waa sida warbixinta ku cade, qiimaha beeralayda laga siisto halka kilo fooxa ah( 1kg), $70-$80 dollar.labada nooc ee Somaliland ka baxa waxaa la kala yidhahdaa Moxor (Boswellia sacra) waxay bixisana waa beeyo. Nooca kalena waa Yagcar (Boswellia frereana) xabagteeduna waa Maydi.
Dalka kale ee soo saara ama dhagaxa ka qoda waa Ethiopia, Sudan, india. Balse Fooxa Somaliland ayaa noqday ka ugu tayadda Fiican.
Hadaba shirkadda hormoodka unoqotay inay waxani oo cilmi baadhayaal ahi (researchers) oo kale duwan oo qaarkood ka socdaan, wakaaladihii dawooyinka ee yurub iyo Maraykan. Waxaa waxaa waxaa layidhaa ASLI MAYDI. Waxaana sameeyey wiil qurba joog ah oo magaciisa layidhaa, Barkhad Jibriil Faarax. Waxaa beeralayda laga siisan jiray $1 dollar halkii kilo, mararka qarkoodna raashin ayaa lagaga badalan jiray. Wuxuu ka siistay oo iminka uu gaadhsiiyay in dadkii uu ka siisto $10-$15 halkii kilo, wuxuu albaabadda u laabay shirkado badan oo durufaha dhaqaale xumo kaga faiidaysan jiray danyarta.
Shirkaddan ALI MAYDI, waxaa kale oo dadkii qarkood ayey dukaamo ganacsi u furtay, dadka xanuusanaya ee beeralayda ah oo ay waxqabad cafimaadka ah ka caawiso, abaaraha iyo hawlo mutadawcnimo ay u qabato,sida k abaaraha gobalka sanaag ka dhaca. waxaanu kaloo soo xaqiijinay. Wiilkani inuu ka soo jeedo Dagmadda Gobalka Sanaag ee Qodmo-Biyo Cas.
Balse waxaa halis ku haya Beeyadda Gobalka Sanaag Shirkaddo, Dulin ku noqday. oo si tuugo ah ku dhoofiya Sida shirkadahan: Ismacil export, Geelle Export, candle light. Dhirta beeyadda oo sanadkii loogu talogalay in shanbillo la qoomo(la jeex) sideeda bilood ee kalena uu geedku is dhayo , nabaradda la qoomay. Ayaa waxaa soo baxday tuug u shaysa shirkado waaweyn ama ganacsato waa weyne oo reer Hargeisa ah . inay shaqalysiisteen tuug sanadkii geedka qoomaya 12 bilood ba. Tani waxay sababtay inay dhirban oo beeyo ahi ay dhimato. Wasaaradii deegaanka ee wax ka qaban laydna , dhibta ayey ka badhtahayba. Waxaanu madaweynaha oo xogta ugu badan ee beeyadda og, ilaa xiligii uu wasiirka ka ahaa dawladda Somaliya, inuu digreeto ka soo saaro sidii loo bad baadin lahaa beeyadda, iyo shurucdiiba. Madama uu aad u ilaalin jiray xiligi uu wasiirka ganacsiga Somalia ahaa. Tacab bandanna uu galiey.
Warbxinta waxaa diyaariyey;
Ururka Horumarinta Gobalka Sanaag
Sanaag Development Association
Mohamoud Maxamed Cilmi
Article horeWADDANI Wuxuu Noqday Hasha Geela Cunta Ee Haddana Cabaadda!
Article soo socdaMaamulka Dugsiga Agoomaha Ee Kuweyt Ka Dhistay Hargeysa Oo Qirtay Fadeexado Loo Jeedinayey